Raysal wasaare Xasan Khayre oo kusii jeeda Imaaraatka Carabta – Radio Daljir
Febraayo 25, 2018 7:45 b 0
Warar aan ka helayno xafiiska raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya inuu ku wajahanyahay maanta oo Axad ah wadanka Isutagga Imaaraatka Carabta.
Wararka ayaa sheegaya socdaalka inuu la xiriiro casuumaad uu ka helay madaxda dowladda Imaaraatka Carabta.
Dowladdaha Imaaraatka iyo Soomaaliya ayaa xiriirkooda uu hoos u dhacay wixii ka dambeeyey go’aankii dhexdhexaadnimada ee Soomaaliya ka qaadatay khilaafka dowladaha Khaliijka iyo Qatar.
Khayre ayaa horay ugula kulmay magaalada Davos ee Swezerland wasiirka arimaha dibadda ee dalkaasi, waxaana ay dowladda Imaaraatka Carabta ay saamayn ku leedahay siyaasadda Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey.
Ciidamo katirsan Kenya oo qarax lagula eegtay Gedo